QM oo ku baaqday in lala Xisaabtamo dadka Taageera Burcad Badeeda. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / QM oo ku baaqday in lala Xisaabtamo dadka Taageera Burcad Badeeda.
QM oo ku baaqday in lala Xisaabtamo dadka Taageera Burcad Badeeda.
Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in si deg deg ah wax looga qabto oo lala xisaabtamo dadka taageera kooxaha Burcad Badeeda Soomaalida ee ka qowlaysanaaya xeebaha Soomaaliya iyo gacanka Cadmeed.
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee u qaabilsan arimaha Soomaaliya Axmedou Wald Cabdalla ayaa ku baaqay dalka Japan iyo Beesha Caalamka in ay cadaalada horkeenaan cid weliba oo taageera Burcad Badeeda Soomaalida.
Isagoo Saxaafiyinta la hadlaayay ayuu sheegay Wakiilka in Burcad Badeednimada ay noqotay ganacsi fa’ido weyn u ah dad dambiileyaasha iyo Ururada,isagoo ku baaqay Dowladaha Caalamka in ay raadiyaan hogaamiyeyaasha Burcad Badeeda.
”Dad xadidan ayaa maalgiya isla markaana ka fa’idey Burcad Badeednimada,waxaana ay tahay arin aan iska indho tirin”,ayuu yiri.
Mr. Wald Cabdalla ayaa ka gaabsaday in u magacaabo ama sheego Shakhsiyaadka uu arkay in ay Burcad Badeeda Soomaalida gacan siiyaan.
Waxaana u ku celceliyey in Qaramada Midoobay ay ka soo horjeedo in lacag madaxfurasho ah la siiyo Burcad Badeeda Soomaalida marki ay qafaashaan gaadiid Badeeda,waxaana u muujiyey in lacagta madaxfurashada ay dhiiragelin ku tahay Burcad Badeeda in ay si wadaan howlahooda.
Dhowaan ayay ahayd marki Qaramada Midoobay ay wakhti dheeraad ah ku kordhisay howlgalka lagula dagaalamaayo Burcad Badeeda,iyadoo ay sheegtay in Burcad Badeeda lagula dagaalami karo Biriga Soomaaliya.